Home News Saraakiil katirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu toogtay Deegaanka Galboole
Saraakiil katirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu toogtay Deegaanka Galboole
Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe fagaare ku yaalla degaanka Galboole ee dhaca Galbeedka Gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ku toogteen sarkaal ka tirsanaa ciidanka dowladda oo ay horay ugu xukumeen xukun dil ah.
Maxkamadda Shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegtay in sarkaalkan wada shaqeyn ay kala dhaxeysay Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ee ka howlgalla gudaha Soomaaliya.
Warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa ku sheegtay Magaca Maxamed Cali Maxamed oo ku magac dheeraa Kartoon.
Shabaab ma aysan soo bandhigin sawirro ama cadeymo muujinaya sarkaalkan ay sheegeen inay toogteen, marka laga reebo in warkan ay soo qorteen.
Previous articleWaa Kuma Sheekh Maxamed Idiris?
Next articleAmmaanka Magaalada Baydhabo oo si weeyn loo adkeeyay
Xaaf oo kahadlay Qarax Dad badan ay kudhinteen oo kadhacay Magaalada...